NamasteNEPALI.com: 'मेरो छोराको ज्यान गयो, मधेसले के पायो ?'
'मेरो छोराको ज्यान गयो, मधेसले के पायो ?'
सिरहा भदाै ५ । 'मधेस आन्दोलनबाट धेरै नेता जन्मिए, उनीहरू मन्त्री पनि भए तर मधेसी जनताले के पाए? ' २०६३ सालको मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोका बुबाको प्रश्न हो यो ।
लहान बजारदेखि १८ किलोमिटर दक्षिण-पश्चिम सिरहाको फूलबरिया मझौरामा शुक्रबार पुग्दा घरमा 'सहिद' का बुवा रवि, आमा रानो र दाजु बालकृष्ण थिए। रविले निराश हुँदै भने, 'सहिदको बलिदान खेर गयो। मेरो छोराको बलिदान केही मान्छेलाई मन्त्री, नेता र माननीय बनाउन मात्र थिएन।'
नौ वर्षअघिको मधेस आन्दोलन र छोरा रमेशका विषयमा कुरा सुरु गर्दा आमा रानो भक्कानिइन्। संविधानको विषयमा केही बताउन नजान्ने उनले भनिन्, ‘धेरै छोराका आमा यसरी नै रोइरहेका छन् । आँसु पुछ्ने नेता कोही भएनन्।'
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले अबको आन्दोलनमा सहिद हुनेका परिवारलाई ५० लाख नगद, नोकरी र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको पनि रमेशका बाबुआमाले सुनेका छन्।
'फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घरमै आएर दिएको वचन त पूरा गरेनन्। अब के होला?' रविले भने, ‘मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिका एउटा छोरा सहिद भयो, हामीजस्ता धेरै छोराले तपाईंलाई सहारा दिन्छौं भनेका थिए । खोइ, त्यसपछि कोही आएनन्।' अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।